FNG : « Tsy ampy traikefa ny mpitarika mpizahatany » | NewsMada
FNG : « Tsy ampy traikefa ny mpitarika mpizahatany »
Par Taratra sur 07/06/2016
Manodidina ny 50 ny fikambanana mivondrona ao anatin’ny Federasiona nasionalin’ny mpitarika mpizahatany (FNG) eto Madagasikara. Nambaran’ny mpikambana ao aminy sady solotenan’ny FNG ao anatin’ny Ofisim-pirenen’ny fizahantany eto Madagasikara (ONTM), Rarivosoa Rivomahefa, fa mbola tanora ny fizahantany eto amintsika ary tanora toy izany koa ireo mpitarika mpizahatany. Tsy ampy ny maha matihanina mahafehy ny sehatry ny fizahantany ireo mpandraharaha satria saika tsy niofana amin’izany ny ankamaroan’izy ireo, fa mionona amin’ny fananam-bola fotsiny.
Nomarihiny fa tsy misy ifandraisany amin’ny tsy fisin’ni fitoaniana politika, anisan’ny manimba ny fizahantany sy ny fitotongan’ny fahatongavan’ny mpizahatany io fanamarihany io, fa noho ny tsy fahampian’ny politika maharitra ho an’ity sehatra ity.
Anisan’ny antom-pisian’ny FNG, noho izany ny hametrahana amin’ny toerany ny asan’ny mpitarika mpizahatany, toy ny atrikasa, ny fiofanana, ohatra Miara-miasa amin’ny ONTM ity federasiona ity. Mitondra ny hetaheta sy ny sosokevitry ny mpikambana koa eny amin’ny tompon’andraikitra isan-tsokajiny. Ao anatin’izany ny fanatsarana ny zotra sy ny lalana ary ny toerana ho an’ny mpizahatany, ny fampiantranoana, ny fotodrafitrasa samihafa, sns.